Korea Ghost Story-1( Nine-Tailed Fox)( 2008 ) - Myanmar Asian TV
Korea Ghost Story-1( Nine-Tailed Fox)( 2008 )
MMATV Channel Pageမှတင်ဆက်လိုက်တဲ့ Horrorကားကြိုက်သူတွေအတွက် Qualityကောင်းကောင်းနှင့်ကြည့်နိုင်ဖို့ 2008 မှာထွက်ရှိထားတဲ့ Korea Ghost Stories လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်???
Story လေးတွေကတော့ တစ်ခုချင်းစီကသူ့ဇာတ်လမ်းနှင့်သူမို့ တစ်ကားပြီးတစ်ကားကြည့်ရတာ movie တစ်ကားချင်းဆီကြည့်ရသလိုဖြစ်မှာပါ
((သောကြာနေ့တိုင်း Friday Night Feverအနေနှင့် story
Nine- tailed Fox(Gumiho)
လီမျိုးနွယ်အိမ်ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ပေါင်း ၄၀၀ကတည်းက မြေခွေးရဲ့ ကျိန်စာ မိနေသူတွေပါ
သူတို့အိမ်က မွေးဖွားလာတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ အပျိုဖော် စဝင်တာနဲ့လပြည့်နေ့ရောက်ရင်
ထိုသို့ မြေခွေးအဖြစ်သို့ မပြောင်းခင် အဲ့ဒီ မိန်းကလေးကို လီမျိုးနွယ်အိမ်ရဲ့ မြေးအကြီးဆုံးက သတ်ရမှာပါ
မိန်းကလေးတွေနဲ့ အမေတွေက မသိခဲ့ကြဘူး
ဒီအိမ်မှာ ဆိုးအို့ နဲ့ မြောင်အို့ဆိုတဲ့ညီမနှစ်ယောက်လည်း
နေထိုင်ပြီးတော့ သူတို့ညီမနှစ်ယောက်က အစ်ကို ဝမ်းကွဲဖြစ်သူ အိမ်ရဲ့ မြေးအကြီး ဟိုမွန်နဲ့
ဟိုမွန်ဟာ အခုလို ကိုယ့်အိမ်သား အမျိုးသမီးတွေကို သတ်ရတာကို မလုပ်ချင်တဲ့ သူဖြစ်ပြီး အဘိုး အဖေတွေရဲ့ တွန်းအားပေးမှုကိုလည်း ခံနေရပါတယ်
တနေ့တော့ ဆိုးအို့က အပျိုဖော်စဝင်လာပါတယ် ဒါကို ဟိုမွန်က ဆိုးအို့နဲ့ မြောင်အို့ကို လူကြီးတွေကို မပြောဖို့ မှာပေမဲ့လည်း ဆိုးအို့ အပျိုဖော်ဝင်မှန်း လူကြီးတွေက သိသွားပြီး စီစဉ်စရာရှိတာ စီစဉ်ပါတော့တယ်
ဟိုမွန်က သူ့ကို လပြည့်ညမှာ သတ်ရတော့မှာပါ လပြည့်ညမှာပဲ မြောင်အို့က ဆိုးအို့ကို မိသားစုဝင်တွေ ဖမ်းခေါ်သွားတာကို တွေ့သွားတော့တယ်
ဆိုးအို့က တကယ်ပဲလပြည့်ညမှာ မြေခွေးအဖြစ်
ဟိုမွန်ကကော မြေးအကြီးအဖြစ် တာဝန်ကို လုပ်ဆောင်ဖို့ ညီမအရင်းလို ချစ်ရတဲ့ ဆိုးအို့ကို သတ်နိုင်ပါ့မလား
လျှို့ဝှက်ချက်ကို တွေ့သွားတဲ့ မြောင်အို့ကကော ဘာဆက်ဖြစ်မလဲ……..
Main casts တွေအနေနှင့်ကတော့ တကယ့်နာမည်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ Park Min Young,Kim Ha Eun,Kim Tae Ho ,Choi Dang Suk,Park Woongတို့ကပါဝင်ထားကြပါတယ်
Translator : Snow
Genre: Drama, History, Horror, Mystery, Romance, Thriller
Director: Kwak JungHwan
Actors: Choi Dang Suk, Kim Ha Eun, Kim Tae Ho, Park Min-young
Openload.co Myanmar 716 MB Download Soliddrive.co Myanmar 716 MB Download
The Flowers of War ( 2011 )
တရုတ်နှင့်ဂျပန်စစ်ဖြစ်နေချိန်ကိုအခြေခံရိုက်ကူးထားတဲ့ကားလေးဖြစ်ပြီး war-drama ဇာတ်လမ်းပုံစံပါ … သူ့ခေတ်သူ့အခါက အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကားဆိုလဲ မမှားပါဘူး …. ၁၉၃၉ တရုတ် – ဂျပန် စစ်ပွဲတုန်းက နန့်ကင်းမြို့ရဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်တစ်ပုဒ်ကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ထားတာပါ … House of Flying Daggers , The Great wall အစရှိတဲ့ကားတွေကို ရိုက်ကူးပုံဖော်ပေးခဲ့တဲ့ Director ကြီး Yimou…
My Little Monster ( 2018 )
Japan Live Action ပရိသတ်တွေအတွက် 2018 ခုနှစ်ထွက် My Little Monster ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကားလေး Blu-ray ထွက်ရှိလာပြီဖြစ်တာကြောင့် တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ် … ပေါ့ပေါ့ပါးပါး school နောက်ခံလေးနဲ့ Romance ကြိုက်သူတွေအတွက်တော့ အကြိုက်တွေ့စေမယ့် ဇာတ်ကားလေးတစ်ကားပါ … ဇာတ်လမ်းလေးက ချစ်ဖို့တော့ ကောင်းပါတယ် … Anime ကို Live…
Yell for the Blue Sky ( 2016 )
Original Name – Aozora êru ဒီတစ်ခါတော့ စိတ်ဓာတ်ခွန်အားလဲပေး … အချစ်လေးလဲ ရောထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတစ်ခုလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်တယ်နော် … ဇာတ်ကားလေးရဲ့ နာမည်လေးက (Aozora êru – Yell for the blue sky) တဲ့ … Kazune Kawahara ရဲ့ Manga ကိုပြန်ရိုက်ထားတဲ့…